– साजन के.सी.
बन्दीपुरको कुनै होटलको बन्द कोठामा हामी भरपूर मजा गरिरहेका थियौँ । उसको नाम तृप्ति थियो । उसको नामजस्तो मनासिब अरु कसको नाम थियो होला र ? मलाई आजसम्म त्यति बिघ्न तृप्त अरु कसैले बनाएको थिएन । जति उसले बनाएकी थिई । जति उसको वदनले, यौवनले बनाएको थियो । तर, सी वाज चीटिङ अन हर बोइफ्रेन्ड । हो, उसको प्रेमी म थिइनँ । र ऊ मेरी प्रेमिका थिइन । वास्तवमा, त्यतिबेला मेरो कोही प्रेमिकै थिईन । तर उसको प्रेमी चाहिँ हाम्रै एउटा क्लासमेट थियो । एण्ड तृप्ति वाज चीटिङ अन हिम् । बिचरा हिम् । उसको र मेरो सम्बन्धको चुइँको हामीबाहेक अरु कसैलाई थिएन । र हाम्रो योजना यो सम्बन्धलाई यसरी नै कायम राख्ने थियो ।
कलेज हुँदा हामी एक आपसमा खासै बोलचाल गर्दैनथ्यौँ । एकअर्कालाई देखे पनि नदेखेजस्तो गरी हिँडथ्यौँ । फेसबुकमै भित्रभित्र गोप्य रूपमा कुराकानी हुन्थ्यो हाम्रो । ऊ बेलुकाबेलुका उसको बोईफ्रेन्ड असीमसँग कलेजनेरको खोलातिर डुल्न जान्थी । असीम उसलाई असीम माया गथ्र्यो । उसको लागि महँगा–महँगा गिफ्ट खरिद गरिदिन्थ्यो । बेलाबेला उसको मोबाइल रिचार्जले भरिदिन्थ्यो । चक्लेट्स किनेर दिने, उसका प्रोजेक्ट, असाइन्मेन्ट गरिदिनेजस्ता जोइटिङ्ग्रे काम गरी नै रहन्थ्यो । हामी केटाहरू उसलाई समझाइरहन्थ्यौँ । केटीलाई यति बिघ्न माया दियो भने मातिन्छन् भनेर । ऊ बिचरा माया र विश्वास भए त भइगयो जस्ता झुर डाइलग दिइबस्थ्यो ।
बरु तृप्तिको १२ कक्षामा एउटा बोइफ्रेन्ड थियो रे । उसँग चाहिँ सब्थोक हुन्थ्यो रे । उसले पछि तृप्तिलाई छाडेर अर्कैसँग गयो रे । तृप्ति पागल भई सुसाइड गर्ने स्टेजमा पुगेकी थिई रे । उसैकी एउटी मिल्ने साथीले उसलाई सम्हालेकी थिई रे । बडो मुस्किलले । पछि उही साथी ब्रेकअप भएर विष खाई आत्महत्या गरिछे ।
तृप्ति र म भेट्न प¥यो भने अघिल्लो रात नै भेट्ने स्थान र समयबारे फेसबुकमा डिस्कस गरिसक्थ्यौँ । एक्लाएक्लै जान्थ्यौँ । भेट्ने ठाउँ पुगेर मैले होटल बुक गर्थेँ, अनि ऊ रुममा आएर नक गर्ने गर्थी । होटल प्रायः कि बेशीसहर कि बन्दीपुर नै हुन्थ्यो । र हामी प्रायः होटलबाहिर घुम्न कतै जान्थेनौँ । बन्दीपुरमा कहिलेकाहिँ कतै गए पनि म क्याप र चस्मा अनि ऊ सल ओढ्ने गर्थी । यसरी नै चल्दै आएको थियो, हाम्रो गोप्य सम्बन्ध ।
“सायद अब हामी फेसबुकमा कुरा गर्दा सेफ हुन्न,” तृप्तिले ब्रा लगाउँदै भनी । अगाडि हुक भा’कोवाला थियो । मैले कष्ट गर्नु परेन ।
“किन ?” मैले सोधेँ ।
“अस्ति असीमले मेरो मोबाइल चला’कोथ्यो । झन्डै तिम्रो म्यासेज देखेन ।”
“म्यासेज डिलेट गर्ने गरेकी छैनौ ?”
“सधँै कहाँ हुन्छ ? कहिलेकाहिँ त बिर्सिहालिन्छ नि !”
“याप लक यूज गर न ?”
“शङ्का गर्दैन उसले ?”
“शङ्का ? त्यसले ? तिम्लाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्छ । पागलजस्तो ।”
“जेपिटी नभन है अर्काको बिएफलाई ।”
“के रे ?” म जुरुक्क खाटबाट उठेँ । पुरै नग्न अवस्थामा थिएँ । “अब तेस्को माया लाग्न थाल्यो ?”
“लाग्छ नि, बिचरा,” उसले भनी ।
“अनि ?” मैले उसको नाङ्गो भुँडीमा काउकुती लगाउँदै भनँे । “मेरो ?” ऊ खिस्स हाँसेर मलाई पन्छाउन थाली । “मेरो चाहिँ लाग्दैन ?”
“लाग्दैन,” उसले भनी । मैले उसलाई समातेर फेरि खाटमै लडाएँ ।
अर्को दुई महिना यसरी नै चल्यो । दुईपल्ट बेशीसहर गयौँ अनि एकपल्ट बन्दीपुर । एक्जामको बेलामा पनि जसोतसो चाँजो मिलाउने नै गर्थ्यौं । पाँचौ सत्रान्त सकियो । इण्डिया टुर हुने भयो । हामी तीनै जना जाने भयौँ । म, तृप्ति अनि उसको प्रेमी असीम । त्यसै पनि तृप्ति गएसी असीम नजाने कुरै थिएन ।
ए साँची, मैले भन्न बिर्सेको कुरा । असीम र तृप्तिको सेक्स भइसकेको थिएन । उसले त्योबारे कुरा नै गर्दैन रे । एक वर्ष भइसकेको थियो उनीहरूको सम्बन्धको । बरु तृप्तिको १२ कक्षामा एउटा बोइफ्रेन्ड थियो रे । उसँग चाहिँ सब्थोक हुन्थ्यो रे । उसले पछि तृप्तिलाई छाडेर अर्कैसँग गयो रे । तृप्ति पागल भई सुसाइड गर्ने स्टेजमा पुगेकी थिई रे । उसैकी एउटी मिल्ने साथीले उसलाई सम्हालेकी थिई रे । बडो मुस्किलले । पछि उही साथी ब्रेकअप भएर विष खाई आत्महत्या गरिछे ।
खैर, इण्डिया टुरको कुरा । गोरखपुरसम्म हामी केटा एउटा ग्रुप, केटी अर्को ग्रुप भएरै घुम्न थाल्यौँ । केटामा पनि ने.वि. सङ्घ र प्रा.क.को एकुन्टा ग्रुप छुट्टियो । यो ग्रुपिजम केटीहरूमा पनि लागू थियो । तर गोरखपुरबाट कोलकता पुग्दासम्म भने जोडी–जोडी कसैको बाल नदिई एकापसमा टाँसिएर हिँड्न थालेका थिए । असीम र तृप्ति पनि कुहिनोमा कुहिनो गाँसी बजारबजार डुल्दै थिए । म भने आफ्नै झ्यापे साथीहरूसँग ट्यापे स्टायलमा यताउता रल्लिरहेको थिएँ ।
हिँड्दा–डुल्दा बेग्लाबेग्लै हिँडे पनि बेलुकाचाहिँ हामी एउटै होटलमा अटाई नअटाई खाँदिने गथ्र्यौं । केटा टोली एउटा फ्लोर, केटी टोली अर्को । कलकताको दोश्रो दिन थ्यो क्यारे । हावडा ब्रिज नजिकैको एउटा कम्सल होटलमा बसेका थियौँ । भोलि सवेरै चेन्नाईको लागि रमाना हुने योजना थियो ।
माथि छतमा दिउँसो सुकाएको लुगा उठाउन जाँदा तृप्ति र असीम एउटा कुनामा टाँसिएर बसिरहेको देखेँ मैले । म आएको देखेर उनीहरू अलिकत हिच्किए । मैले उता कत्ति नहेरी सुरुसुरु आफ्नो लुगा बटुलेँ र तलतिर ओर्लिएँ ।
खाना खाने बेला हामी बाहिर निस्कियौँ । असीम र तृप्तिले खाना पनि सँगसँगै टाँसिएरै खाए । बिर्यानी–चपाती अनि खै के के । हाम्ले चाहिँ दाल भात आर्डर गरेका थियौँ । मेरा झ्यापे साथीहरूले के भनिरहेका थिए मलाई केही मेसो थिएन । म केवल उनीहरूलाई नै हेरिबसेको थिएँ ।
एकछिनपछि मेरो दाहिने साँप्रोमा केहि तातो अनुभव भो ।
“ओ यार, सरी,” अनुपले मतिर हेरेर भन्यो । मैले तलतिर हेरेँ । मेरो सेतो पाइन्टले दालको पँहेलो रस सोसेर माथी छोक्रामात्र बाँकी राखेको थियो ।
“साले !” म अनायास बेसरी नै चिच्याउन पुगेछु । “अली राम्रसी गर्न सक्दैनस् ?” अनुप वाल्ल परेर मतिर हेरिराख्यो । मैले यताउति नजर डुलाएँ । सबै उसैगरी रसगुल्ला जत्रा आँखाले मैतिर हेरिरहेका थिए । “सरी, नरिसा न,” अनुपले भन्यो । म केही नभनी टिस्यू पेपर निकालेर आफ्नो पाइन्ट सफा गर्नपट्टि लागेँ । अनुपले हेल्प गर्यो । म केही बोलिनँ । एकछिनपछी मैले फेरि तृप्ति र असीमतीर नजर डुलाएँ । उनीहरू आफ्नै सुरमा खिस्सखिस्स हाँस्दै बिर्यानी खाइरहेका थिए । तृप्तिले असीमको प्लेटबाट मटन निकालेर क्वाप्प मुखमा हाली । मैले नजर वापस आफ्नो दालभातमा थुपारेँ ।
मलाई तृप्तिसँग बोल्ने केवल एक मौका चाहिएको थियो । मसँग इण्डियाको सिम कार्ड थिएन । तेसैले डाटाबाट कुरा गर्न मिल्थेन । होटलको वाई–फाई पनि हाम्रो रुमसम्म टिप्थेन । खाना खाईक्यारी म तल लाउन्जमै एकछिन मोबाइल चलाई बसेँ । अघिको पाइन्टसम्म पनि चेन्ज गर्न भ्याएको थिईनँ ।
“एकछिन भेट्न मिल्छ ?” मैले तृप्तिलाई म्यासेज गरेँ ।
“कस्तो किन हो र ? मलाई भेट्न मन छ ।”
“हामी केटीहरू कुरा गरिराछौँ ?”
मलाई खपीसक्नु भएन ।
“तिम्ले के खोजेको ?” मैले एक्कासी सोधेँ ।
उसको रिप्लाई केही बेर आएन ।
“ओए ।” अहँ, कुनै रिपे छैन । पाँच मिनेट यत्तिकै बसेँ अनि मात्र म्यासेज सिन देखायो र रिप्लाई आयो ।
“के भयो ?” उसले भनी ।
“भन्दिम सब थोक ?” म यता रिसले चूर भइसकेको थिएँ ।
“के रे ? कस्लाई ? के भन्ने ?”
“तिम्रो त्यो जोइटिङ्ग्रे गोलुलाई ।”
“ओए, हेर है । जे पाए काम नगर ।”
“माथि छतमा आऊ । दुई मिनेटमा ।”
“व्हाट ? आउँदिन म ।”
“तेसो भए म सब स्क्रीनसट पठाइदिन्छु तेस्लाई । अनि खाँदै बस तेस्को प्लेटबाट बिर्यानी ।”
“किन यस्तो गर्दै छौ ?”
“खुरुक्क माथि आऊ ।”
म माथि छतमा उसलाई कुरेको दुई–तीन मिनेट जति भएको थियो । केहीबेरमा मैले हस्याङ्फस्याङ् उसको पदचाप सुनेँ । छतमा पल्लो होटलको मिहीन उज्यालो बिचमा मात्र अलिअलि छरिएको थियो । बाँकी कुनाकाप्चा सपाट अँध्यारोमा बेरिएका थिए । मैले अघि नै मोबाइल लाईट बालेर जाँचिसकेको थिएँ । छतमा अरु कोही थिएन ।
“के हो के ?” ऊ मनजिक आउँदै भनी ।
मैले च्याप्प उसको पाखुरा जकडेँ, “के भैराछ, हँ ?”
“के ?” उसले आफ्नो पाखुरा मेरो पकडबाट उम्काउन खोज्दै भनी ।
“खूब बैँस पलाइराछ तिमेर्को ?”
“हि इज माई बोइफ्रेन्ड ।”
“ओ, अनि मसँग सुत्दाखेरी चाहिँ ऊ को नि तिम्रो ?”
“त्यो हामीबिचको कुरा हो, कमल !”
मैले उसको पाखुरा छाडेँ अनि दाहिनेतिर हेरेर कम्मरमा हात राखी लामो सास तानेँ ।
“तिमी प्लीज एस्लाई क्म्प्लिकेटेड नबनाऊ ।”
“मलाई गर्न मन लाग्यो,” मैले भनेँ ।
“व्हाट ? नो !”
“दुई मिनेट त हो । कमन्,” मैले उसलाई कुनातिर लग्दै भनेँ ।
“कमल, नो !” उसले आफ्नो पाखुरा मबाट तान्दै भनी ।
“डोन्ट याक्ट लाइक दिस इज आवर फर्स्ट टाइम ।”
“मैले भने नि, मलाई अहिले मन छैन ।” उसले आफ्नो पाखुरा मेरो हातबाट फुत्त तानी अनि सरासर आफ्नो बाटो लागी ।
मलाई खपीनसक्नु भयो । भर्खरको भर्खर हाम्रा सब स्क्रीनसट उसको बोइफ्रेन्डलाई पठाउन मन भयो । मैले मोबाइल पनि निकालेँ । उफ्, तर साला वाइफाई टावर थिएन । केही सिप नलागेर खल्तीबाट एक खिली चुरोट निकाली सल्काएँ अनि रन्थनिँदै लामोलामो कस लीन थालेँ ।
चेन्नाईको ट्रेन एक घन्टा डिले भो । हामी प्ल्याटफर्म नम्बर ४ वरपर माहुरीजसरी छरिएर डुलिरहेका थियौँ । अल्ली पर तृप्ति र उसको बोइफ्रेन्ड भनौँदो एकअर्काको फोटो र सेल्फी उतारिरहेका थिए । बिचरालाई के थाहा, कि उसले केवल उसको फोटो मात्र उतार्न पाएको छ भनेर । बाँकी अरु सब त मैले नै उतारिसकेको छु !
“के हो ?” स्वप्निलले मेरो काँधमा हात राखिभन्यो । “त्यो जोडीलाई त खूब हेर्छस् नि तैँले ।”
“के भो त तँलाई ?” मैले उसको हात पन्छाउँदै रिसाएजस्तो गरी भनेँ ।
“सोध्न नि हुन्न तँ मुलीलाई ?”
मैले केही बोलिनँ ।
असीम डेरा आँखा पार्दै मतिर लम्कियो । “के हो तिम्रो प्रब्लम ?” उसले कुटुँलाझैँ गरी भन्यो । “अरु कपल्स पनि त खेलिराछन्, तिम्लाई केको टाउको दुखाई ?”
“असीम प्लीज,” तृप्तिले रौँलीझैँ गरी उसको हात समाती, “लेट्स गो ।” अनि तिनै आँखा मतिर सारी ।
म चुपचाप केटाहरू भएतीरै लम्किएँ । अहिले ख्याल भो, सबैजना मैतिर पो हेरिरा’ रैछ्न् ।
“छाड्दे न त । अर्काको जोडी देखेर ईर्श्या लायो होला नि त कमलजीलाई ।” किन किन सबिनको बोलीले मेरो कन्सिरी रन्केर आयो । अचानक मेरो दाहिने ह्त्केला उसको गालामा गएर झ्याम्म बजारियो । ऊ एकछिन त्यहीँ रन्थनियो । अनि सम्हालिँदै, सरासर आएर मलाई एक मुक्का कस्सेर दियो । एकछिन हाम्रो त्यहीँ घम्साघम्सी प¥यो । सबैजना हामीलाई छुट्याउनतिर लागे । हामीसँग आएका दुई शिक्षकले ट्रेडिस्नल पारामा हामीलाई हपारे । “अर्काको देस्मा आएर यस्तो गर्ने ? बच्चा हौ ?” बगेरावगेरा ।
मेरा आँखाले भिडमा तृप्तिलाई नै खोजे । ऊ मतिर वाल्ल परी हेरिरहेकी थिई । उसको छेउमा उसको हात समातेर बसेको थियो उसको जोईटिङ्ग्रे प्रेमी ।
चेन्नाई पुगियो । अक्टोबरको महिना भएकाले गर्मी त्यति बिघ्न थिएन यहाँ । सबिनसँग मैले ट्रेनमा नै माफी मागिसकेको थिएँ । तैपनि ऊ मसँग अझै खफा देखिन्थ्यो ।
चेन्नाईबाट पोन्डुचेरी जाँदा हामीले पहिलोपटक समुद्र देख्यौँ । बसमा सबैजना मरीमरी चिच्याउन थाले । म पनि हलुका चिच्याएजस्तो गरिदिएँ । हामीभन्दा अल्लि पछाडि तृप्ति र असीम बसको एउटै सिटमा बसेर चिच्याइराखेका थिए । एकछिनपछि बस एउटा बिचनजिकै आएर रोकियो । हामी खालीखुट्टा हिँडेर बिचसम्म पुग्यौँ । सबैजना उफ्रेर समुद्रतिर दौडन थाले । एकछिन मैले पनि सब थोक बिर्सिगएँ र केटाहरूसँग पानी छ्यापीमा मनमगन हुन थालेँ । तृप्ति भने आफ्नो साथीहरूको पनि वास्तै नगरी आफ्नो प्रिय बोइफ्रेन्डसँगै पानी खेल्नमा मस्त थिई । होइन, यिनिहरू नेपाल फर्किएसी साला सीधै बिहे पो गर्छन क्यारे ? बोइफ्रेन्डलाई धोका दिएर अर्को केटासँग सुत्ने केटी नि के सारो रोम्यान्टिक भाकी त ? यसलाई स्वाद चखाईदिम् ?
म सरासर तृप्तितिर हाकिएँ । असीम उसलाई अन्जुलीको पानी छ्याप्दै निच्च हाँसिरहेको थियो । मैले एकाएक च्याप्प तृप्तिको पाखुरा समातेँ र सबैको अगाडि उसलाई पानीमा लडाइदिएँ । ऊ ठुल्ठुला आँखा बनाएर मतिर हेर्दै उठी ।
“हाउ डेर यु ?” उसले आफ्नो रुझेको कपडा र मतिर पालैपालो हेर्दै भनी ।
“भन्दिम सब एसलाई ?” मैले असीमतीर इशारा गर्दै भनेँ । तृप्तिले रुन्चे मुख पारी । असीम वाल्ल पर्दै मतिर हेरिराको थ्यो । अरु प्रायः सबै आफ्नै सुरमा पानी खेल्न, फोटो खिच्नमै मस्त थिए । मेरा केटाहरू, जोसँग म अघि खेल्दै थिएँ, चाहिँ सायद हामीतिरै हेरिरहेका थिए कि ?
“प्लीज, म बेल्का भेट्छु,” उसले सासले भनी ।
“खूब, खूब बैंस चड्या छ हैन तिमेर्को ?” मैले दुबैतिर हेरेर भनेँ ।
पोन्डूचेरी घुमेर बेलुका बास बस्न चेन्न्नाई नै फर्कियौँ । होटेल खटारो थ्यो । सबैजना कोचाकोच अटाईनअटाई त्यहिँ खाँदियौँ । बेलुकापख तृप्तिले नै मलाई भेट्न बोलाई ।
“तिमी यस्तो किन गर्दै छौ ?” उसले मेरो हात पकडेर भनी । ““हि इज माई बोइफ्रेन्ड, तिमी किन जेलस हुँदै छौ ? पहिला पनि त ऊ मेरो बीएफ नै थ्यो ?”
“मलाई था’ छैन । अस्ति माथी देऊ भन्दा किन नदेको ?”
“मलाई मुड थिएन ।”
“सधैँ तिम्रो मुडमा चल्नुपर्ने म ?”
“ल हिँड, तिम्लाई त्यही चाहिएको हो भने माथी छतमा जाऊँ ।” हामी थर्ड फ्लोरमा थियौँ । अरु सबै खाना खान बाहिर गएका थिए । सिर्फ हामी मात्र आ—आफ्नो बहानामा बसेका थियौँ । उसले मेरो हात समाती मलाई छततिर लगी । मैले आफ्नो हात ऊबाट खोसी ऊसँग उसको पछिपछि डोहोरिएँ । माथि हामी केही बेर किस गर्याँै, उसले हतारहतार आफ्नो सुरवाल खोली र हतारहतार हामी आफ्नो यौनकार्य पनि सक्यौँ । वा भनौँ, सिर्फ मैले सकेँ । त्यसपछि ऊ केही नबोली सुरुसुरु तल आफ्नो बाटो लागी ।
चेन्नाईपछि हामी कन्याकुमारी गयौँ । त्यसपछि हैदराबाद । अनि बैँगालुरु हुँदै गोवा । तृप्ति र असीम उसरी नै एकअर्काका आँखाका नानी भएर यात्राको मोज लिइरहेका थिए । म चाहिँ सफरभरि तिनीहरूको आँखी नै भइराखेँ । मलाई थाहा थिएन कि म के चाहन्थेँ । हिजोसम्म मलाई उनीहरूको बाल मतलब नभएको अहिले आएर एक्कासी किन मलाई उनीहरूको समिप्यताले यसरी पिरोलिरहेछ ? मेरो दिलमा के चलिरहेछ ? के म साँच्चिकै तृप्तिलाई माया गर्छु ? के यौनकार्य भन्दा उपर पनि हाम्रो सम्बन्धको अर्को तल्ला छ ?
गोवामा दोस्रो दिन थियो । यहाँ पब्लिक सवारीको त्यस्तो राम्रो सुविधा थिएन, त्यसैले हामी चलाउन सक्नेले बाइक वा स्कूटर हायर गर्ने अनि चलाउन नसक्नेलाई पछाडि बसेर अन्जुना बिच र अन्य ठाउँमा घुम्ने निधो गर्यौँ । असीमलाई सवारी चलाउन आउँथेन, त्यसैले ऊ अब आफ्नो प्रेमिकासँग छुटिन प¥यो । म खुसीले गद्गद भएँ । तृप्ति मेरै पछाडि आएर बस्छे भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ । हामी आ—आफ्नो बाइक–स्कूटर लिएर निस्कन थाल्यौँ । मैले हरियो कलरको रोयाल इन्फिल्ड लिएको थिएँ । सवारी चलाउन जान्ने र प्रेमिका हुने केटाले आफ्नै प्रेमिकालाई पछाडि राखे । स्कूटर चलाउन आउने केटीले पनि आफ्नो साथी वा प्रेमीलाई पछाडि राखे । छलफल गर्दै जाँदा तृप्ति मेरै पछाडि बस्ने भई । म गमक्क परेँ । असीम सबिनको ड्यूकमा बस्ने भयो ।
तर हिँड्नै लाग्दा असीम बाइकमा नचढी लुरुलुरु मतिर आयो । मलाई लाग्यो तृप्तिलाई किस गर्न होला । हाउ चिप्कू ! तर उसले तृप्तितिर हेरी नजानिँदरी मुसुक्क हाँस्यो मात्र र मेरो नजिक आएर मेरा आँखामा हेरी भन्यो ।
“यत्रो दिन मेरो तृप्तिको ख्याल राख्यौ, त्यसको लागि र आजको लागि धन्यवाद साथी,” ऊ चेहरामा एक अजीब मुस्कान खेलाऊँदै सुरुसुरु सबिनको बाइकमा गई बस्यो ।
पछाडिबाट तृप्तिले सुटुक्क भनी, “उसलाई सब थाह छ ।”
“व्हाट ?” मैले लुकिङ ग्लासमा उसलाई हेर्दै भनेँ । “मजाक नगर । कहिले भनेको ?”
“त्यो रात चेन्नाईपछि ।”
“अनि उसलाई केही फरक पर्दैन ?”
“उसले अप्सन दियो । कि तिमी कि ऊ ?”
“अनि मैले उसलाई रोजेँ ।”
म केही बोलिनँ । सबैले घ्याईँघुईँ बाइक–स्कूटर स्टार्ट गरे । मैले पनि गरेँ । हामी सफरभरि चुपचाप केही नबोली बस्यौँ ।
तृप्तिले उसलाई के भनी कसरी भनी, भनी वा भनिन, त्यो मलाई थाहा छैन तर त्योभन्दा ठूलो कुरा उसले मलाई भनेकी थिई, “अनि मैले उसलाई रोजेँ ।”
नेपाल वापस आएपछि फेसबुकमा हाम्रो फेरि कहिल्यै गफ भएन । बाटोमा हिँड्दा पाहिलेको जस्तै हामी एकअर्कालाई देखे नदेखेझैँ गरी हिँड्थ्यौँ । पछि कलेजका कोही न कोहीले उनीहरूलाई कि बन्दीपुर कि बेशिसहरमा देखिरहन्थे रे । केही महिनापछि मैले उसको वास्तै गर्न छाडिदिएको थिएँ । तर पनि कहिलेकाहीँ जब होस्टलको छतबाट ऊ र असीमलाई हिँडिरहेको देख्थेँ, मेरो मन त्यसैत्यसै हुँडलिन्थ्यो । लाग्थ्यो, तृप्तिले मेरो शरीरको प्यास मेटाउँदा मेटाउँदै, मेरो मुटुलाई झन् ठुलो प्यास दिएर गई ।
– पोखरा, हाल : लमजृुङ
शुक्रबार, माघ २, २०७७, १८:२८:००
नेकपा पार्टी ऋषि कट्टेलको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला ५१ मिनेट पहिले